အာဗဒူလာAvcıသည်နည်းပြအသစ်ဖြစ်လာပြီးနောက် Trabzonspor တွင်ဘာများပြောင်းလဲမည်ကိုလူတိုင်းသိလိုကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အဗ္ဗဒူလာအဗီစီတို့အကြားဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤဆွေးနွေးပွဲများ၏နောက်ကွယ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံရှိသောဆရာသည်အထူးသဖြင့်သူ့စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ပြည့်စုံသောတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခင်ကဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်မန်စီးတီးစသည့်ကလပ်များသို့မိမိ၏လက်ထောက်များကိုစေလွှတ်ခဲ့သည့်အဗ္ဗဒူလာAvcıသည်ထိုကလပ်များကဲ့သို့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Trabzonspor သည်အလားတူနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အဗ္ဗဒူလာAvcıသည်Başakşehirတွင် ‘Actor Performance Laboratory’ တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ လယ်ကွင်းမှကျွမ်းကျင်သူ ၁၀ ယောက်သည်မည်သည့်ကစားသမားနှင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်အပေါ်မည်မျှတင်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီသည်တစ် ဦး ချင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဒဏ်ရာအန္တရာယ်များနှင့်အညီအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းနီးပါးသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ဒဏ်ရာပြproblemsနာများကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ရာသီ၏အစတွင် Trabzonspor သည် ‘Physical Performance Centre’ ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်မှကျွမ်းကျင်သူများကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ Hunter သည်ဤစနစ်ကို Trabzonspor တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်။
အတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပြသည် Trabzonspor အခြေခံအဆောက်အအုံရှိကစားသမားများ၏အခြေအနေကိုအနီးကပ်လိုက်နာလိမ့်မည်။ ကလပ်၏အတွေးအခေါ်နှင့်အညီအလုပ်လုပ်မည့်အဗ္ဗဒူလာAvcıသည်စွမ်းရည်ပြည့်ဝပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသောအမည်များကို A အသင်းနှင့်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်းတွင်လည်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ၏အစီအစဉ်၊ စနစ်၊ စည်းကမ်းနှင့်နားလည်မှုကိုရှင်းပြသော Abdullah Avcıသည်သူ၏တင်ပြချက်များကိုအလွန်မြတ်နိုးကြောင်းသိရှိခဲ့ပြီးရာသီအလိုက်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်မည့် Trabzonspor ကိုဖန်တီးရန်သူ၏အင်္ကျီများကိုချထားပြီးဖြစ်သည်။ အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအောင်မြင်သောဆရာသည် Burgundy-Blue အသင်းကိုဒီပန်းတိုင်များအားလုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ယနေ့တွင်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။
BETPAS423 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! SULTANBET568 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! RESTBET501 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ BETBOO661 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ BETBABA100 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ BETBOO868 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ SUPERBAHİS483 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ
15 Comments on RESTBET501 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ
ÜNSAL November 24, 2020 at 3:50 am
SERDAR November 24, 2020 at 4:10 am
ANGIN November 24, 2020 at 1:30 pm
EMRAH November 24, 2020 at 7:20 pm
MERT November 24, 2020 at 8:20 pm
CEM YAŞAR November 25, 2020 at 7:00 am
FATİH November 25, 2020 at 8:10 pm
UĞUR November 26, 2020 at 2:30 pm
MEHMET VEHBİ November 27, 2020 at 12:40 pm
YUSUF November 27, 2020 at 11:00 pm
HALİL November 29, 2020 at 4:50 pm
ZEYNEP December 1, 2020 at 2:30 am
CEMİLE ÇİĞDEM December 5, 2020 at 7:50 pm
ÖZCAN December 5, 2020 at 10:40 pm
AHMET December 6, 2020 at 1:10 am